Ilaa dhamaadka guga ha sugin AirPods cusub Pro | Waxaan ka socdaa mac
Inbadan ayaa ah xanta in bilihii la soo dhaafay ay ku xeeran yihiin daahfurka jiilka labaad ee AirPods Pro, jiil hadaan iska indhatirno wararka xanta ah, wax ka badali doona naqshadeeda iyadoo la dhimayo cabirkeeda lana baabi'inayo jirida
Wararkii ugu dambeeyay ee laxiriira daahfurka jiilkan labaad ee AirPods Pro tilmaamay bishii Abriil. Laakiin, haddii aan dhag u dhigno xanta ugu dambeysa, ee ka timaadda DigiTimes, illaa dhammaadka guga, waxay u badan tahay in Apple uusan ku sii deyn doonin suuqa.
Sida laga soo xigtay warbaahintan, Winbond Elektaroniga waxay heshay amarro fara badan oo loogu talagalay xusuusta flash-ka ee NOR flash, amarada ayaa ah waxaa loo isticmaali doonaa khadka wax soo saarka ee AirPods Pro, inkasta oo la cayimay nooca ay tilmaamayso, laakiin waxaa si maldahan u sheegaya inay noqon doonto nooca leh buuq baajinta.
DigiTimes waxay sheeganeysaa in shirkadani ay tahay mid kamid ah shirkadaha hormuudka u ah xasuusta NOR flash for jiilka soo socda ee 'AirPods Pro', oo bartilmaameedsanaya sii deynta "dambe qeybtii hore" ee 2021.
Winbond ayaa ka shaqeyneysa awood wax soo saar buuxa inta lagu jiro qeybta hore ee sanadka sababo la xiriira amarada tirada badan, inkasta oo aan la ogeyn inta la xiriirta Apple, laakiin waxay u badan tahay inay tahay qaybta ugu weyn.
Wararkii ugu dambeeyay ee ka hadlay bilaabida AirPods Pro waxay tilmaameen Abriil 2021, halka warar kale ay tilmaamayaan qeybtii hore ee 2021. Waxa iska cad ayaa ah in hadda waan sugi karnaa fadhigamaadaama laga yaabo in taariikhadan dib loo dhigo mar kale xaalada cudurka ee hadda jira awgeed.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Xanta » Ilaa dhamaadka guga ha sugin AirPods Pro cusub